Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadda Finland oo go’aansatay ka qaybgalka banaanbaxa Stolkholm
Jaaliyadda Finland oo go’aansatay ka qaybgalka banaanbaxa Stolkholm
Waxaa shir si cilmeyeysan loo soo abaabulay shalay galab uu ka dhacay xafiiska jaaliyyada Soomaalida Ogadeniya ee dalka Finland, shirkaas oy isugu yimaadeen hawlwadeenka jaaliyada iyo xubnaha jaaliyada ee dalka Finland.
Shirka ayaa waxaa looga hadlayey arimo badan oo quseeya hawlaha jaaliyada S.Ogadeniya ee taageerta halgan gobanimadoon ee ka socda Ogadenya, sida diyaargarowga ka qaybgalka mudaharaadka ka dhici doona caasimada dalka Sweden ee Stockholmoo ay soo qababqaabiyeen haya’do caalami ah iyo ururka suxufiyiinta Sweden.
Mudaharaadkaas ayaa lagu wadaa inay kasoo qaybgeli doonaan dhamaan jaaliyadaha Somaalida Ogadeniya ee qaarradan Yurub kaasoo lagu muujinayo sida looga xunyahay xukunka xaqdarrada ah ee lagu xukumay labadii wariyeye ee Sweden oo ay xukumada KT melez ku riday maxkamad xaqdarro bishii hore iyagoo lagy xukumay 11 sano oo xadhig ah. Mudaharaadka ayaa wuxuu dhici doonya 14ka bishan hadii Allaha awooda lihi ogolaado.
Sidoo kale waxaa warbixno laga dhegeystey weftigii jaaliyada uga qaybgalay kalfadhigii 2baad ee ururka Midowga Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadeniya ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano (OYSU) ee ka dhacay magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka.
Waxaa kaloo lagu soo qaaday shirka qiimaynta howlaha jaaliyada iyo horumarintooda, sida qorshii lagu shaqayn lahaa 2012ka oo nuqul ka mid ah goobta lagusoo bandhigay.
Siwalbaba shirku wuxuu ku bilowday kuna dhamaaday jawi aad u wanaagsan iyo sidii loogu talogalay, waxaana laga rajaynayaa jaaliyadda guul iyo horumar.
Cabdiraxnaan Jarari Helsinkifinland